Ny zom-pirenen'i Saint Lucia
Olom-pirenena momba ny St Lucia Passport an'i St. Lucia
CITIZENSHIP an'i SAINT LUCIA
Olom-pirenena an'ny St Lucia - fatoran'ny governemanta - mpitovo
Olom-pirenena amin'ny St Lucia - Tetikasa Enterprise - tokana
Olom-pirenena an'ny St Lucia - NE Fund - mpitovo
Olom-pirenena ao amin'i St Lucia - FIVORIANA FIVORIANA - Fiainana tokana
Olom-pirenena amin'ny St Lucia - Tetikasa Enterprise - Fianakaviana
Olom-pirenena amin'ny St Lucia - NE Fund - Fianakaviana
Citizenship St Lucia - Tetikasan'ny trano sy tany - Fianakaviana
Olom-pirenena amin'ny St Lucia - fatoran'ny governemanta - Fianakaviana
Ny maha-olompirenena an'i St Lucia - FIVAVAHANA 19 - Fianakaviana
CITIZENSHIP SA SA LUCIA FILOHANA ARA-PANAHY
Fepetra ho an'ny fizotry ny zom-pirenena Saint Lucia
Tombontsoa azo amin'ny zom-pirenen'i Saint Lucia
Ny programa Saint Lucia dia mamela anao ho lasa olom-pirenenan'ity fanjakana ity amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola. Ny sasany amin'ny tombony lehibe azo amin'ny zom-pirenena Saint Lucia dia:
ny fahafahan'ny fitsidihana tsy misy visa (na visa rehefa tonga) any amin'ny firenena 140 mahery eran'izao tontolo izao (ao anatin'izany ny 90 andro tsy misy visa any amin'ny EU);
fanatsorana ny fizotran'ny fahazoana visa maharitra any Etazonia;
haingam-pandeha fisoratana anarana (2 ka hatramin'ny 6 volana);
Ireo tomponà pasipaoro Saint Lucia dia tsy voatery hipetraka ao amin'ilay firenena. Tombony iray lehibe manandanja ihany koa ny tsy fisian'ny hetra fidiram-bola ho an'ireo mponina ao amin'ny hetra.
Fepetra ahazoana pasipaoro
Ny mpampiasa vola dia manomboka amin'ny 18 taona
Laza tsy misy kilema (samy irery na orinasa)
Tsy misy firaketana heloka bevava
Fahafahana manamarina ny niandohan'ny vola
Tsy misy olana ara-pahasalamana mafy
Fandraisana anjara amin'ny Tahirim-bolam-pirenena. Ny vola kely indrindra dia $ 100,000. Rehefa nahazo pasipaoro nataon'ny mpamatsy vola sy ny vady / ny vady dia hampitombo ny habetsaky ny fampiasam-bola hatramin'ny 140 dolara amerikana ary ho an'ny fianakaviana iray hatramin'ny olona 4 - hatramin'ny 150 dolara amerikana. Tsy azo averina ny fandraisana anjara.
Fividianana trano sy tany. Ny vola kely indrindra dia 300 5 dolara amerikana. Ny fampiasam-bola dia azo atao amin'ny fananana ankatoavin'ny governemanta. Ny fivarotana trano dia avela afaka XNUMX taona.
Fiarovana. Vola fampiasam-bola - avy amin'ny $ 250. Afaka mividy fividianana governemanta tsy misy zana-bola ny mpampiasa vola. Raha fianakaviana 4 no mahazo zom-pirenena Saint Lucia, ny vola fampiasam-bola dia $ 250,000 (fahamatorana 7 taona) na $ 300,000 (fahamatorana 5 taona). Raha mihoatra ny 4 ny olona ao amin'ny fianakaviana dia 15 dolara amerikana fanampiny no takiana ho an'ny tsirairay.
Orinasa. Azo atao ny mampiasa vola 3.5 tapitrisa $ farafahakeliny amin'ny tetikasa iray nahazo fankatoavana avy amin'ny governemanta. Ilaina ihany koa ny famoronana asa 3 farafaharatsiny. Anisan'ireo faritra azo ampanjifaina ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, fotodrafitrasa fitaterana, fikambanan'ny mpikaroka sns.